YouTube XL joogsadeen Shaqada? Isku day Siyaabo kale oo lagugu Daawo YouTube on Devices
> Resource > YouTube > YouTube XL mar dambe ma ay taageerayaan? Isku day inaad ka wanaagsan Daawo YouTube Videos on Vario
Inta sano ah, Google diiradda iyo cunfiga dadaal ku abuuraya fiican YouTube-aragnimo TV. Tani waxay keentay in baahida loo qabo horumarinta ugu fiican YouTube XL. Tani waa version ah YouTube oo ayaa diyaar u ah in loo isticmaalo qaar ka mid ah Toshiba, Pioneer, oo lagu daydo TV Sharp oo sidoo kale diyaar u ah gobollada kooban oo Nintendo Wii iyo Sony PS3. Iyadoo YouTube XL, waxaad daawan kartaa jecel videos online hore ee shaashadda TV aad.
Laakiin ay dhammeeyaan taageero ee YouTube XL on June 9, 2013. Sidaas oo kale, ma Forbes ayaa soo baxay. Weli waxaad ka heli kartaa siyaabo kale oo ay ku raaxaystaan ​​daawashada YouTube on qalabka la qaadi karo. Siyaabo Kuwani waa soo socda.
Xalka 1: Iyada oo la soo degsado for loo maqli ku saabsan qalabka aad
Solution 2: Iyadoo YouTube ee ugu weyn website
Xalka 3: Iyadoo app YouTube on TV
1. Si fudud soo bixi videos ka YouTube iyo 100 websites sida vimeo, Dailymotion iyo wax ka badan
2. Mid ka mid ah click soo bixi playlists YouTube iyo channels
3. U beddelaan videos in qaabab kala duwan si loo ciyaaro qalab kasta oo
4. Taageeridda daalacashada ka mid ah Chrome, Firefox iyo IE
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube soo bixi YouTube videos
Riix download ka link kor ku xusan si aad u hesho barnaamijkan. Waxaan doonaa qaadan version Windows sida tusaale. Ka dib markii ay soo degsado, guji faylka .exe si ay u rakibi on your computer.
Tag YouTube si aad u hesho videos aad rabto oo iyaga u ciyaaro. Ka dib markii barnaamijka uu ka dareemo video ah, a Download button ka muuqan doontaa xaq u sareeya. Riix badhanka si ay u soo bixi video ah. Haddii aad soo degsado playlist ah, riix Download button aad siin doonaa ikhtiyaar ah playlist in hoos u soo dhaadhacay menu. Dooro playlist oo dhan videos ee playlist ee lagala soo bixi karaa.
Tallaabada 3. Transfer videos qalabka la qaadi karo
First of dhan, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo videos ah si ay u la taageero. Taasi waa mid aad u fudud. Taga laybareeriga ayaa ku dhameysatay kaalinta in guji badalo dooro qaab aad jeceshahay. Markaas tagaan si ay u gediyay maktabadda in mouse ka badan videos iyo waxaad ka heli doontaa ah Folder icon muuqan. Click icon oo taga si folder halkaas oo files soo bixi aadna ku badbaaddeen. Markaas waxaad ku wareejin karaa videos ee qalabka la qaadi karo xagga cable USB ah.
Xalka 2: Iyadoo website YouTube ee ugu weyn
Kale waxaa loogu talagalay PS3 iyo Wii. Waxaad fiirin kartaa YouTube.com by adiga oo isticmaaleya isticmaale PS3. Gobollada qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad si soo bixi app PS3 dukaanka Playstation awoodaan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa YouTube.com aad Wii. Waxaad kala soo bixi laga yaabaa app Wii ka Wii Shop Channel.
Xalka 3: Iyadoo YouTube app TV
Waxaad ku raaxaysan laga yaabaa in television filaayo in YouTube-aragnimada ay la isticmaalayo app YouTube on TV . Ku rakib app this on your TV iyo bilaabaan in ay ku raaxaystaan ​​videos cajiib ah on YouTube. YouTube waxaa laga heli karaa qalab badan oo kala duwan television, consoles'ka ciyaarta, kiniiniyada iyo wax ka badan. Just leeyihiin isku day ah.
Sida aad arki karto, waxaa jira habab badan oo ku saabsan sida aad ku bilaabi kartaa daawashada aad ugu jeceshahay YouTube videos online inkastoo YouTube XL ma laga heli karaa oo dhan. Sida xaqiiqada ah kuwanu 3 xal idin siin doonaa habka ugu fudud ee ay u daawadaan YouTube videos fudayd. Kuwani 3 xal laguu suurogeliyo in aad mar walba u daawado iyo meel kasta oo aad tagto. Haddaba sidaas daraaddeed, uma baahnid inaad ka welwelina unavailability ee YouTube XL.